Wednesday August 08, 2018 - 13:01:18 in Wararka by Super Admin
Maleeshiyaat Soomaali ah oo ay wehlinayaan cutubyo ciidamo Mareykan ah ayaa maalintii shalay qabsaday deegaan lagu magacaabo Buulo-Kuuto oo ku yaalla duleedka degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ka dib markii ay qaadeen howlgallo deegaanadaas looga ci
Maleeshiyaat Soomaali ah oo ay wehlinayaan cutubyo ciidamo Mareykan ah ayaa maalintii shalay qabsaday deegaan lagu magacaabo Buulo-Kuuto oo ku yaalla duleedka degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ka dib markii ay qaadeen howlgallo deegaanadaas looga ciribtirayo dagaalyahanada Al-Shabaab sida ay warka u dhigeen.
Ciidamadan huwanta ah ayaa ujeedkoodu ahaa in ay ka sii gudbaan tuulada, islamarkaana ay u dhaqaaqaan dhanka deegaanada howdka ah ee ay saldhigyada ku leeyihiin dagaalyahanada Al-Shabaab balse waxaa la sheegay in ay muddo saacado ah ku hakadeen deegaanka kadibna ay dib uga soo baxeen.
Ilo wareedyo iyo dad goob joogeyaal ah ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyey in ciidamada Huwanta ee ka koobnaa Soomaalida iyo American-ka ay in ay dib ugu soo noqdeen degmada Balcad oo markii hore ay ka duullaan tageen.
Ciidamada DFS iyo kuwa shisheeye ayaa waayadii dambe ka walwalsanaa awoodda ee ciidan ee dagaalyanada Al-Shabaab ay ku yeesheen deegaanada hoostaga degmada Balcad oo qiyaastii 30km u jirta magaalada Muqdisho.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka howlgala deegaanadaas ayaa dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey weeraro isugu jira dagaallo iyo kamiino ku beegsaday maleeshiyaat iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka HiirShabelle, waxayna ku guuleysteen in ay jaraan isu socodka Muqdisho iyo Jowhar.
DFS iyo Ciidamada Shisheeye ayaa ku guuldareystay ka hortagga weerarada Al-Shabaab ee deegaanadaas iyo in la furo isku socodka wadadaas halbowlaha ah.